बुधबार १ देखि ६ लटका निजी कार–जिपले तेल पाउने, यी पम्पमा पाइन्छ पेट्रोल (सूचीसहित)
Published: January 26, 2016 19:42 PM
काठमाडौं, माघ १२ । नेपाल आयल निगमले बुधबार (भोलि)देखि तीन दिन चारपांग्रे निजी सवारी–साधनलाई पेट्रोल वितरण गर्ने भएको छ ।यसका लागि विभिन्न पेट्रोल पम्पहरुलाई मंगलबारै पेट्रोल उपलब्ध गराउने निगमले जनाएको छ ।बुधबार १ देखि ६ नम्बर लटका ब्लु–बुक नवीकरण भएका कार–जिपले ५९ ओटा पेट्रोल पम्पबाट पेट्रोल लिन पाउने व्यवस्था...
वीरगन्ज नाकाबाट धमाधम मालसमान भित्रिन थाल्यो
Published: January 26, 2016 16:04 PM
वीरगन्ज, माघ १२ । भारतीय नाकाबन्दी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको धर्नाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज नाकाबाट मालसमानहरु भित्रिने क्रम बढेको छ । रक्सौल भन्सारका अधिकारीहरुले नेपालमा भित्रने सामानहरुको निकासी कार्य सुरु गरेपछि रिक्सा, टांगा, साइकल र टायरमा समानहरु ल्याउने क्रम बढेको हो । ...
तीन दिनमै बन्छ कम्पोष्ट मल, यस्तो छ विधि
Published: January 26, 2016 11:48 AM
दीपक लोहनी -काठमाडौं, माघ १२ । तीन दिनमै सजिलैसँग कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ भन्दा अधिकांश किसान, नगरबासी र फोहर व्यवस्थापनका सरोकारवालाहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर अब अचम्म मानिरहनु पर्दैन । नेपाल–जापान कृषि आदानप्रदान कार्यक्रमले कम्पोष्ट मल तीन दिनमै सजिलैसँग बनाउन सकिने प्रविधिबाट काम गरिरहेको छ । ...
रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जान्छन, विदेशी नेपाल आउँछन(भिडियो हेर्नुहोस)
Published: January 26, 2016 11:45 AM
धनकुटा, माघ १२ । युवाहरुको बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको मोहका कारण धनकुटामा मजदुरको अभाव भएको छ । धनकुटामा घरेलु काम र निर्माणमा संलग्न मजदुरको अभाव हुँदै गएपछि अवैधानिक भारतीय कामदार भित्रिने क्रम पनि बढेको छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरु बिदेशिने क्रम बढ्दो छ । तर कतिपय विदेशीहरुका लागि भने नेपालकै बिभिन्न क्षेत्र...
माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु, असार मसान्तभित्र काम सकिने
Published: January 26, 2016 10:25 AM
पोखरा, माघ १२ । कास्की जिल्लाको सिल्दुजुरे गाविसमा निर्माणाधीन माथिल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु भएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले इन्धन तथा आयोजनालाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भएपछि असोजको पहिलो हप्तादेखि नै आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द भएको थियो । ...
रक्सौलमा अब अवरोध छैनः भारतीय अधिकारी
Published: January 26, 2016 11:38 AM
वीरगन्ज, माघ १२ । भारतीय अधिकारीहरूले रक्सौल नाका हुँदै नेपाल भित्रने मालबाहक सवारी साधनलाई अब आफ्नो तर्फबाट कुनै अवरोध नहुने बताएका छन् । भारतको रक्सौल भन्सारका मिडिया प्रभारी अभिषेक कमलले भने, ‘व्यापारीहरु ट्रकसहितकै सामान लैजान तयार भए हाम्रो तर्फबाट कुनै अवरोध छैन । हामी कस्टम जाँचपास गर्न तयार छौ ।’ मितेरी...
नेपाली गाडी–मोटरसाइकल बिना इजाजत भारत प्रवेशमा रोक
Published: January 25, 2016 18:46 PM
पर्सा, माघ ११ । निर्वाधरुपमा भारत प्रवेश गर्दै आएका नेपाली नम्बरका गाडी सोमबारदेखि भन्सार कार्यालयको अनुमति बिना भारत प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन् ।नेपाली नम्बरको गाडी वीरगन्ज नाकाबाट भारतमा प्रवेश गर्दा रक्सौल कस्टमको अनुमतिमा मात्र प्रवेश गर्न पाउने भारत सरकारले सोमबारदेखि नियम लागू गरेको हो ।भारतले नेपाली नम्बरका मोटरसाइकललगायत...
निगमको तीन वर्षे सुधार योजना सार्वजनिक, चारओटा जहाज भित्र्याउँदै निगम
Published: January 26, 2016 08:01 AM
काठमाडौं, माघ ११ । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो सेवालाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षे सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ ।सोमबार राजधानीमा कार्यक्रम गरी निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले आन्तरिक तथा बाह्य उडानको संख्या थप्नेदेखि निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनेसम्मका योजना अघि सारे ।...
ट्याक्सीलाई छुट्टै पम्पको व्यवस्था, ट्याक्सीले कहाँ–कहाँ, कहिले पाउँछन् पेट्रोल ?
Published: January 25, 2016 16:36 PM
काठमाडौं, माघ ११ । इन्धन संकट चुलिएको लामो समयपछि नेपाल आयल निगमले राजधानीमा सन्चालन हुने ट्याक्सीका लागि छुट्टै पेट्रोल पम्पबाट तेल दिने भएको छ ।आयल निगमले कालो नम्बर प्लेट र हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीहरुलाई पेट्रोल वितरणका लागि छुट्टै पम्प तोकेको छ ।अबदेखि टेकुको नेसनल ट्रेडिङ, बसुन्धाराको महालक्ष्मी, सानेपाको इन्द्रायणी...
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक घटे, गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कमी
Published: January 25, 2016 12:44 PM
चितवन, माघ ११ । पर्यटकीय मौसममा समेत नाकाबन्दीका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । मुख्य पर्यटकीय याम मङ्सिर–पुस महिनामा गत वर्षको तुलनामा पर्यटकको सङ्ख्या ५० प्रतिशत घटेको छ । पुसमा आठ हजार २२ जना पर्यटक मात्रै निकुञ्ज प्रवेश गरेका छन् । निकुञ्ज आउने पर्यटकमा विदेशी तीन हजार ६...
Published: January 25, 2016 14:36 PM
काठमाडौं, माघ ११ । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले अभावको मौका छोपेर खाना पकाउने एलपी ग्याँसलाई मनपरी मूल्यमा बेच्ने डिलरलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । बजारमा देखिएको एलपी ग्याँसको अभावका बेला ७ दशमलव १ किलोग्राम ग्याँसलाई ७ सय रुपैयाँ लिनुपर्नेमा मनलाग्दी मूल्य लिएर विक्री वितरण गरेको पाइएको भन्दै संघले...
तेह्रथुममा कोदोको उत्पादन बढ्यो
Published: January 25, 2016 09:34 AM
तेह्रथुम, माघ ११ । तेह्रथुममा यस वर्ष कोदो उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । विगत वर्षभन्दा यसवर्ष मौसम अनुकुल भएसँगै करिब १० प्रतिशतले कोदो उत्पादन बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको २ हजार ७ सय २ हेक्टर जमीनमा लगाइएको कोदो खेतीबाट यसवर्ष ३ हजार २ सय ४२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि...
Published: January 25, 2016 14:06 PM
जाजरकोट, माघ ११ । भेरी नदीको किनारमा एक चिनियाँ कम्पनीले सुनखानीको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । जाजरकोटको खलङ्गा धल्ला र जगतिपुर मटेलास्थित भेरी नदीको बगरमा चिनियाँ कम्पनी धर्मश्री माइनले सुनखानीको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको हो । धल्लामा चिनियाँ नागरिक सङ्पिङको नेतृत्वमा रहेको टोलीले...
आइतबार कुन नाकाबाट कति भित्रियो इन्धन!
Published: January 25, 2016 08:59 AM
काठमाडौं, माघ १० । आज दिनभरमा काँकडभिट्टा–पानीट्याङ्की नाकाबाट ६४ मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिए । यस्तै विराटनगर–जोगबनी नाकाबाट दिनभरमा ४ बुलेट ग्यास, ५ ट्रक औषधि र २०४ वटा मालवाहक गाडी नेपाल प्रवेश गरेको सीमा प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । भैरहवा सुनौली नाकाबाट ४७ ट्यांकर डिजेल, १८ ट्यांकर पेट्रोल, ४ बुलेट...
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं : अर्थमन्त्री
Published: January 24, 2016 19:45 PM
काठमाडौं, माघ १० । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । त्यसका लागि नीतिगत एवं कानूनी संरचनामा परिमार्जन आवश्यक भए सरकार तयार रहेको उनको भनाई छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ६४औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा...